अमेरिकामा कोरोनाबाट १ लाखभन्दा कमको ज्यान जाने ट्रम्पको अनुमान
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाखभन्दा कम हुने अनुमान गरेका छन्। ह्वाइटहाउसमा आयोजित एक समारोहबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो अनुमान गरेका हुन्। ‘मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा यो भाइरसबाट १ लाखभन्दा कम मानिसको ज्यान जानेछ तर यो पनि एकदमै भयवाह हो’, उनले भनेका...
ट्रम्पको पुनः दाबी– ‘चीनकै एउटा ल्याबबाट कोरोनाभाइरसको विकास’
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व महामारी कोरोनाभाइरस चीनको वुहानस्थित एउटा ल्याबबाट विकसित भएको दाबी गरेका छन्। ह्वाइटहाउसमा बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो दाबी गरेका छन्। एकातिर अमेरिकी इन्टिलिजेन्ट एजेन्सीहरुले चीनले जानीजानी यो भाइरस विकास नगरेको बताइरहेकै बेला...
चीनले मलाई फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन नदिन जे पनि गर्न सक्छ : ट्रम्प
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू दोस्रोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने चीनको चाहना रहेको बताएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँगका अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा चीनले आफूलाई रोक्न चाहेको बताएका छन्। ‘अहिले जरी चीन कोरोनाभाइरस महामारी ह्यान्डल गरिरहेको छ, यसले पनि...
ट्रम्प भन्छन्– ‘किम जोङको अवस्थाबारे मलाई राम्ररी थाहा छ’
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूूलाई उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको अवस्थाबारे राम्रोसँग थाहा रहेको खुलासा गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा सोमबार साँझको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले किम जोङका बारेमा अहिले नै सबै कुरा भन्न नमिल्ने पनि बताए। “म तपाइँहरुलाई सबै कुुरा भन्न सक्दिनँ। मलाई किमको अवस्थाबारे...
चीनले जानीबुझी कोरोनाभाइरस फैलाएको पाइए नराम्रो नतिजा भोग्नुपर्छ : ट्रम्प
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसबाट अहिले विश्वले व्यहोरिरहेको परिस्थितिको जिम्मेवार चीन देखिए नराम्रो नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ह्वाइटहाउसमा प्रेस ब्रिफिङका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ‘कोरोनाभाइरस पहिले चीनमा देखिएको हो, यो सबैलाई थाहा छ’, ट्रम्पले भने,...
राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकामा लकडाउन छिट्टै खुकुलो पार्ने तयारीमा
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसको महामारी जारी रहँदै गर्दा लकडाउन छिट्टै खुकुलो पारिने बताएका छन्। ट्रम्पले 'देशलाई बन्द राखिरहँदा समेत मानिसहरूको ज्यान गइरहेको' बताए। राष्ट्रपतिले राज्यका गभर्नरहरूसँग छलफल गरेर 'उनीहरूले उपयुक्त ठानेका बेला' प्रतिबन्धहरू खुलाउने प्रक्रिया सुरु गरिने ...
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) लाई आर्थिक सहायता रोक्न निर्देशन दिएका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको घटनालाई लिएर कदम चाल्ने सन्दर्भमा न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न डब्ल्यूएचओ विफल भएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो...
ट्रम्प भन्छन्– 'डब्ल्यूटीओ र डब्ल्यूएचओ ‘बब्जी ट्विन्स’ जस्तै'
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ ) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई 'बब्जी ट्विन्स'को सङ्ज्ञा दिएका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा असंयमित रूपमा प्रस्तुत भएका ट्रम्पले विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट उत्पन्न...
ग्यास पाइपलाइन निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णय, यूरोपेली संघ असन्तुष्ट
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसदेखि जर्मनीसम्म प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न निर्माणाधिन पाइपलाइनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ पाइपलाइन निर्माण गरिरहेका रूसी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानूनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसले उक्त कार्यबाट आफ्नो सहयोगी मानिदै आएका यूरोपेली मुलुकहरूबाट क्रेमलिनले...
कर फिर्तासम्बन्धी फैसला उल्टाउन सर्वोच्च अदालतसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिको माग
काठमाण्डौ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर फिर्तासम्वन्धी कागजपत्र माग गरिएको फैसला उल्टाउन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। सो कुरा राष्ट्रपति ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिल जय सेकुलोद्धारा बिहीबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अभियोजनकर्ताहरूको मागपछि एउटा फौजदारी अनुसन्धानअन्तर्गत ती कागजपत्र उपलब्ध गराउन म्यानहाटनको...
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियान: ट्रम्पको फेसबुक विज्ञापन खर्च प्रतिहप्ता रु. ११ करोड
काठमाण्डौ । सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरिरहेको भन्दै निकै आलोचना हुन थालेको छ । चुनावी अभियानमा निकै धेरै रकम खर्च भइरहेको एक डेमोक्र्याट प्रतिस्पर्धी एलिजाबेथ वारेनको दाबी रहेको छ। तथ्य परीक्षण गर्ने बीबीसी रियालिटी चेकले सो दाबीमा अनुसन्धान गरेको...
ट्रम्पद्वारा एप्पलका सीईओलाई चेतावनी, म्याक प्रो कम्प्युटरको पार्टस् चीनमा बनाए आयात शुल्क छुट नदिइने
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एप्पल कम्पनीका सीआईओ टिम कुकलाई कम्पनीले उत्पादन गर्न लागेको म्याक प्रो कम्प्युटरका पार्टस् चीनमा नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । चेतावनीसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि एप्पलले म्याक प्रो कम्प्युटरको पार्टस् चीनमा बनाएर आयात शुल्कमा छुट नदिने घोषणा पनि गरेका छन् । ट्रम्पले ट्विट गर्दै...
ट्रम्पद्वारा भारतलाई चेतावनीः अमेरिकी उत्पादनमा भारी ट्याक्स अस्वीकार्य
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले लिएको नीतिविरद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले फेरि एकपटक भारतलाई सच्चिन चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘अमेरिकी उत्पादनमा भारत सरकारले आयातमा लगाएको भारी ट्याक्स अब स्वीकार्य हुनेछैन ।’ त्यसो त...
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध कम होला ?
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि विश्वमा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक गतिरोध कायमै रहेको छ । यसले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि नराम्ररी असर गरिरहेको छ । तर अब आशा गर्न सकिन्छ कि यी दुई मुलुकबीचको व्यापरिक टकराव अब कम हुन सक्छ । जापानको ओसाकामा भएको जी २० मुलुकहरुको सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप र चिनियाँ समकक्षी...